Ibhulogi Yomkhiqizo |
Ibhulogi Yomkhiqizo: Ungayandisa kanjani impilo yesevisi yokuphakamisa indwayimane
Ngokusetshenziswa okujwayelekile, uma ubuso bendwayimane bonakele, abuzukuthinta ukusebenza kahle kuphela, kepha futhi buzoletha nezingozi ezithile zokuphepha. Ngakho-ke, ngesikhathi sokusebenzisa indwayimane, abasebenzi abangochwepheshe kumele benze ukuhlolwa okufanele. Lapho ukutholakala komhlaba noma ukugqoka sekutholakele, kufanele kuphindwe ...
Ibhulogi Yomkhiqizo: Umkhawulo Womthwalo Wokusebenza
Umkhawulo Womthwalo Wokusebenza umthwalo omkhulu osebenzayo kuhlelo. Akunandaba noma ngabe yimikhiqizo yokulawula izindwayimane noma yokulawula izimpahla, okuwukuphela kwento odinga ukuyikhathalela Umkhawulo Wokusebenza Komthwalo noma Umkhawulo Wokuphepha. Ungahle uhlangane nelinye igama elithi Min. Ukwephula Amandla. Ubuhlobo bayo obuyisisekelo ...
Ibhulogi Yomkhiqizo: Ukusetshenziswa okungu-5 kweSling Synthetic Webbing Slings
Lapho abantu becabanga ngama-webbing slings, bavame ukucabanga ukuthi asetshenziselwa ikakhulukazi ukukhwabanisa ezimbonini zokwakha noma zokukhiqiza. Njengoba izilenge ze-webbbing zinikela ngekhono eliphakeme lokubamba ngokubumba nangokuhambisana nanoma iyiphi indawo, izilenge ze-webbing zingasetshenziselwa izinhlobo eziningi zezicelo ...